गृहिणी देखि ७० जनाको रोजगारदाता सम्म - गोमा लामाको कथा !
नुवाकोटमा जन्मेकी गोमा लामा अहिले ३८ वर्षकी भइन् । उनी आफ्नो सिप र क्षमता प्रयोग गरि विभिन्न आकर्षक हस्तकलाका सामाग्रीहरू आफै उत्पादन गरेर बेच्छिन् भने ७० जना महिलाहरूलाई रोजगारी समेत दिइ रहेकी छिन् ।
बेरोजगार भइ घरमै बसेका दिदी बहिनीहरूलाई उनी सुरुमा तालिम दिन्छिन् र पछि रोजगारी पनि । सँगै मिलेर गोमा र अन्य महिलाहरूले फेल्ट (कपडा) र प्वाँखबाट आकर्षक झोला, जुत्ता, पर्दा, गुडिया, महिलाहरूले कपाल बान्ने रबर, चाबी झुन्ड्याउने र अन्य सजावटका सामाग्रीहरू बनाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्दै आएका छन् ।
पाँच दाजुभाइ र ३ जना दिदीबहिनीमा सबैभन्दा कान्छी गोमाको बाबा नेपाल आर्मीमा हुनुहुन्थियो । त्यसबेला उनको परिवार नुवाकोटका हुने-खानेहरू मै गनिन्थियो । जसलेगर्दा गोमाको बाल्यकालको धेरैजसो समय परिवारको लाहाड-प्यारमै बित्यो । बाहिरी संसारसँग अनविज्ञ गोमा १७ वर्षकी हुँदा उनको विवाह हुने निधो भयो । त्यसपछि उनी आफ्नो जन्मे, खेले हुर्केको गाउँ नुवाकोट लाई चटक्कै छोडेर श्रीमान र परिवारसँग काठमाडौँ झरिन् ।
काठमाडौँको नयाँ रहनसहन त्यस माथि संयुक्त परिवारको बुहारीको रूपमा आफ्नो नयाँ विवाहित जीवन जिउन भर्खर सिक्दै गरेको गोमाले २० वर्षको नपुग्दै पहिलो सन्तानलाई जन्म दिईन्। गोमालाई सधैँ महिलाले अल्छी गर्नु हुँदैन र श्रीमानको कमाइमा मात्र भर पर्नु हुँदैन भन्ने लागि रहन्थियो । तर विवाहपछि थपिएका जिम्मेवारीहरू त थिए नै त्यस माथि पनि कलिलै उमेरमा एउटा छोराको आमाको भूमिकामा बस्नु पर्ने भएका कारण उनले आफ्नै काम वा व्यावसाय गर्ने बारे आँट गर्न सकिनन् ।
भन्छिन् “महिलाहरूको अल्छी गर्ने बानी र श्रीमानको कमाइमा आश्रित हुने प्रवृत्तिले उनीहरू पछि परिरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्ति त्यागेर अघि बढ्न चाहने हो भने महिलाहरू सजिलै सफल हुन सक्छन्। यही उदेश्यले म पनि अझ विशेष गरेर नपढेका महिलाहरूलाई सक्दो रोजगार बनाउन चाहन्छु।”
समय सधैँ एकै नास रहेन, जब छोरा हुर्किन थाल्यो गोमाको आफ्नै पौरख गर्ने अठोटले पनि उनको मन भित्र हुर्कने मौका पायो । खोजी गर्दा असनको एक हस्त निर्मित सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनी “फ्रेन्ड ह्यान्डीक्राफ्टमा” उनले काम पनि पाइन् । तर आफ्नो हातको सिप प्रयोग गरी उत्पादन गर्नु पर्ने काममा सुरुमा उनलाई कम्पनीले तालिम दिनेभयो । चनाखो स्वभाव, अरूले के कस्तो काम र कसरी गर्दैछन् भन्ने कुरा छिट्टै टिपी हाल्ने गोमालाई काम सिक्न केही बेर लागेन । उनले त्यहाँ ७ वर्षसम्म काम गरिन् । एउटै कम्पनीमा ७ वर्ष लामो अनुभव बनाइ सके पछि गोमालाई हस्तकला सम्बन्धी लगभग सम्पूर्ण ज्ञान भई सकेको थियो । यति बेला सम्म उनको दोस्रो छोरा पनि हुर्कीई सकेको थियो ।
त्यतिकैमा उनलाई एउटा अझ प्रतिष्ठित कम्पनीबाट राम्रो जागिरको प्रस्ताव आयो तर अब गोमाको अनुभव सँगै सपनाहरू पनि फेरिई सकेका थिए । उनीले आफ्नो ७ वर्षको जागिरे जीवनबाट “अरूको काम गर्नु भन्दा म आफ्नै केही गर्न सक्छु” भन्ने हिम्मत पाई सकेकी थिइन् । उनलाई एक दिन आफूसँगै अन्य धेरैभन्दा धेरै महिलाहरूलाई रोजगारी दिनु थियो ।
उनले आफ्नो मनको कुरा वैदेशिक रोजगारीमा भएका श्रीमानलाई सुनाइन् । श्रीमान उनको योजनामा सकारात्मक देखिए र उनलाई ५ लाख रुपैयाँ समेत जुटाई दिए । यो नै उनको उद्यमशील जीवनको पहिलो खुड्किलो हुन पुग्यो। आफ्नो आत्मबल र श्रीमानको समर्थनबाट हौसिएकी गोमाले बालाजुको एक खाली जग्गा भाडामा लिइन् । त्यस जग्गामा ट्रस बनाइन् र आफ्नो कम्पनीको नाम पनि राखिन् “बि. एन. एन फेल्ट ह्यान्डीक्राफ्ट” । बि अर्थात् ब्लोन उनको श्रीमानको थर र एन. एन अर्थात् आफ्ना दुई छोराहरू निश्चित ब्लोन र निश्चल ब्लोन को नामको पहिलो अक्षरहरू जोडेर यो नाम जुर्‍यो । सुरुवातमा उनीले ४-५ जना महिलाहरूको साथ लिएर काम सुरु गरिन् त्यस पछि उनले कहिल्यै पछि फर्केर हेर्नु परेन ।
हाल उनको कम्पनीमा ७० जना महिलाहरू आबद्ध छन्। त्यी महिलाहरूमध्ये व्यवस्थापन समूहमा रहेका महिलाहरू १० देखि पाँच बजेसम्म काम गर्नुपर्छ भने पिस रेटमा काम गर्ने महिलाहरूलाई समयको कुनै पाबन्दी छैन। गोमाले उनीहरूले घरमै बसेर पनि काम गर्ने सहज वातावरणको स्थापना गरिदिएकी छिन्। उनले आफ्नी भदैनीलाई पनि काम सिकाएर यस पेसामा विज्ञ बनाइसकेकी छिन्।
यस व्यवसायबाट एक महिनाको कारोबार मात्र १५ देखि २० लाखसम्म हुने गरेको गोमाले जानकारी दिईन्। हालै उनले ठमेलको छायाँदेवी कम्प्लेक्स नजिकै आफ्नो हस्तकलाको प्रदर्शन गर्नका लागि एउटा शोरुम पनि खोलेकी छिन्। उनले यस शोरुमका लागि २० लाख रुपैयाँ लगानी गरिन्।
आफ्नो कलालाई विश्व बजारसम्म पुर्‍याउनका लागि उनी २०७४ सालमा भारत गाइन् भने गएको जेष्ठमा चीन समेत पुगेर आइन्। यसैगरि भविष्यमा युरोपियन बजारहरूमा समेत आफ्नो हस्तकलाको प्रचार गर्ने सोच बनाई राखेकी छिन्।
उद्यमी नेपालको टिमसँग हालै हस्तकला महासङ्घले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको ५ दिने हस्तकला प्रदर्शन कार्यक्रममा भेट हुँदा उनी निकै सक्रिय रूपले आफ्ना समानहरूको बिक्री गरी रहेकी भेटिन्थिन् । हँसिलो अनुहार, आफ्ना ग्राहकहरूसँग मिजासले कुराकानी गरी रहेकी गोमाले भनिन् “ महिलाहरूको अल्छी गर्ने बानी र श्रीमानको कमाइमा आश्रित हुने प्रवृत्तिले उनीहरू पछि परिरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्ति त्यागेर अघि बढ्न चाहने हो भने महिलाहरू सजिलै सफल हुन सक्छन्। यही उदेश्यले म पनि अझ विशेष गरेर नपढेका महिलाहरूलाई सक्दो रोजगार बनाउन चाहन्छु।”
अहिले उनको परिवार उनले गरेको व्यवसायप्रति खुसी छन्। उनी एक सफल बुहारी, दुई छोराकी आमा र श्रीमती त छँदै थिइन्, अब एक सफल उद्यमी पनि बनिसकेकी छिन्।